जस्ताेसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढाै !! नपढे तपाईलाई प’छुताे हुनेछ !! – Life Nepali
जस्ताेसुकै बिजी भएपनि एकपटक अवश्य पढाै !! नपढे तपाईलाई प’छुताे हुनेछ !!
मैले यो देख्ने कोसिस पनि गरिन कि साच्चिकै उनलाई कति ज्वरो थियो मैले त्यस्तो केही गरिन कि उनलाई लागोस कि बिरामीमा उनी ए’क्लि छैन तर मलाई सानो तिनो रु’घाखो’की लागेर टा’उको दु’खिरहेको थियो तर उनी मेरी आमा बनिन म सोचिरहे कि साच्चिकै के भगवानले महिलालाई एउटा अलग्गै दिल दिल्छन ? महिलाहरुमा जुन करुणा र ममता हुन्छ त्यो पुरुषमा किन हुदैन ?
सोच्न थाले ,जुनदिन मेरी पत्नीलाई ज्व’रो आएको थियो , त्यो मध्यान्नमा जब उनलाई भोक लागेको होला र ओछ्यानबाट उ’ठ्न न’सकेकि होली, त्यतिखेर उनले पनि सोचेकी होलिन कि कास मेरो पति आज मसित हुन्थ्यो भने ? मैले जेसुकै सोचु तर मलाई लाग्छ कि हरेक पुरुषलाई एक जन्ममा महिला बनेर यी कुराहरु सम्झिने कोसिस गर्नुपर्दछ कि साच्चै नै कति मुश्किल हुन्छ , महिलालाई महिला बन्नु , आमा हुनु , पत्नी हुनु र बहिनी हुनु |
यसरी उनले आफैँले स्थापित गरेका कम्पनी विक्री गरि एक अर्ब भन्दा बढी आम्दानी गरेका हुन् । आज उनी दुई ठूला सफ्टवेयर कम्पनीका सफल कार्यकारी अधिकृत हुन् । उनले फेरि पनि दोहोर्याउँदै भने ‘फन्डामेन्टल ल अफ फिजिक्स’ नतोडिने जस्तोसुकै कुरा हासिल गर्न सम्भव छ ।” यो लेख तपाईंलाइ कस्तो लाग्यो, कृपया हामी जान्न चाहान्छौ, तेसैले एक लाइक ,शेयर कमेन्ट अबस्य गर्नुहोला। साथै नियमित समाचार र मनोरञ्जनका लागि पेज लाइक गर्न नभुल्नु होला।
Previous एउटा इमान्दार केटा चाहियो, म संगै जापान जाने अनि संगै बस्ने काम गर्ने ! तुरुन्तै सम्पर्क गर्नुहोस् ।
Next स’र्प यसरि पक्रनु पर्छ भनेर सिकाउँन खोज्दा, सिकाउने मान्छेलाई नै स’र्पले टो’केपछि (भिडीयो)